Ibsa koree hojii raawwachiftu ADWUI irratti qabxiilee muraasa - BBC News Afaan Oromoo
Ibsa koree hojii raawwachiftu ADWUI irratti qabxiilee muraasa
Walgahiin koree hojii raawwachiftuu ADWUI guyoota 17 fudhachuun haala cufaa ta'een gaggeefamaa turee fi murteewwan furtuu dabarsa jedhamee eegamaa turees, xumura torban darbee irratti ibsa jechoota hedduutiin xumura isaa beeksiseera.
ibsi koree hojii raawwachiftu haala mummeen dhimmoota akka sochiilee ummata jeeqan to'achuu, lammiilee buqa'an dhaabuu, dhaabbileen miseensaa iftoomaa fi ittigaafatamummaa akka cimsanii, tajaajilawwan motummaa irratti jijjirama fiduu, ummata, haayyuleefi paartilee mormitootaa hirmaachisuu, mirgoota dimokraasummaa fi namoomaa kabachisuufi kan kan fakkaatan hamatera.
Erga ibsichi baheen boodas namoonni hedduun haala qabiyyee isaarratti marii taasisaa jiru. Yadni ibsichaa tokko tokkoos gaaffii kaasu isaanitiin alatti hiikawwan adda addaa itti kennamaa jira.
Qaamooleen ibsi koreen kun baasee akka qabxiilee furtuu haala yeroo akka kaasuu eegaa turan jiran, kuun ammoo hanga eegamee miti kan jedhan jiru.
Keessattuu yaadni ''hariiroo qajeelfama dhabeessa'' jedhamuun kaa'amee kan namoota hedduu burjaajjeessee fi jecha hiikkaawwan garaa garaatiif saaxilameedha.
Kana malees, ''dhaabbilee midiyaa motummaa fi dhuunfaa ''gocha badiinsaa'' irratti hirmaatan haala itti ofi sirreessan mijeessuuf tarkaanfii qindaa'aan akka fudhatamu eeramuunsaa dhimma wal nama gaafachise kan biraa ta'eera.
Yunivarsitii Finfinneetti Profeesara gargaraa seenaafi ogbarruu kan ta'an Obbo Ababaawu Ayaaleew, sababii adda addaatiin waan ibsicha irraa eeganii turan argachu hindandeenye.
Kanaafis sababii yoo eeran, ittigaafatamtoonni motummaa haasawa midiyaalee adda addaarratti taasisaniin, waa'ee Itoophiyanummaa keenyaa dhiisuun irra caala dhimma adda addummaa keenya irratti xiyyeefannaa kennineera jedhu fakkaatu dhagahusaani akka ta'e kaasu.
"Jarreen kunis dhimma kanarratti itti yaaduun qabxii tokko irra ni gahu jedhee yaaadeen ture,'' jechuun BBC'tti himaniiru. Garuu ibsichi waa'ee Itoophiyaanummaa dhisuun kan dhimma sanyii fi dhimma dhaabbaa qofa irratti xiyyeefateedha, jedhu.
"Waa'ee dhaabaa malee biyyattiin garam deemaa jirtii kan jedhuu hinagarsiifne,'' kan jedhan Obbo Ababaaw, ''dhugumattis ibsichi walitti bu'insa dhaabbilee jiddu jiru hiikuuf malee haala biyyattiin amma keessatti argamtu gadi fageenyaa ilaaluun furmaata kan kaa'ee miti,'' jedhaniiru.
Dr Daanyaachaw Asaffaa barsiisaan falaasamaa gama isaanitiin, wanti ummanni Itoophiyaa eegaa jiruuf ibsichii gar gari jedhaniiru.
Gaaffiin uummataan ka'aa jiru naannoo qabxii dhumaati kan jedhan Dr Daanyaachaw, ibsichi garuu dhimmoota kanneen ilaalurra akka waan biyyattii keessatti rakkooleefi mudannoowwan xixiqqoon ta'anitti kan fakkeesseedha jedhu.
Yunivarsitii Ambootti barsiisaaf barreessaa kan ta'e obbo Siyum Tashoma gama isaatiin akkuma Dr Daanyachaw ibsichi piroppaagaandaa paartii barameedha jedhaniiru.
"Miseensoonni koree hojii raawwachiftuu kanaa hanga fedhii biyya keessa jiru ukkamsuu kaayyoo taasifachuun walitti qabamanitti, isaan irraa omaa hineegu,'' kan jedhan obbo Siyuum, 'humna sochii jijiramaa kana ukkaamsu barbaaduuf guyyoota 17 dhiisitii waggoota 17 osoo walgahanii jijirama hinfidan. Kunis sababii jijjiramichi haala adeemsa umama isaa hordofuun kan dhufe ta'eefu,'' jedhaniiru.
Akkasumas ittigaafatamaan qunnamtii ummataafi hojii raawwachisaa paartii madirak kan ta'an obbo Mulaatu gammachus, ibsichi kan uummanni keenya eegu miti jedhaniiru.
Ummatichi jechaa kan jiruu 'jijjirama sirnaatu nu barbaachisa' kan jedhu yoo ta'u, ibsichi garu waa'ee jijjirama suphaa dubbata.
Kana malees, haala biyyattii keessatti argamtu hiikuuf qaamulee adda addaa waliin marii'achuun ala akka waan waldhabdeen namoota dhunfaa waliin jiru fakkeessuun balleessaa keenya fudhaa jirra. Sirreefama akkasii taasifne jechuun furmaata hin ta'u. Sochiilee qabsoo ummata keenyaafis deebii hinkennu jechuun dubbataniiru.
ADWUI waggoota 26 darban guutuu balleesne jirra jechuun ummaticha irraa fudhata argachuuf yaalaa turee jira. haa ta'u malee kana akka malaatti fayyadamuun jijjirama fiduu dhiisuun, ummatichaafis ta'ee carraa biyyattii kan gara fuuladuraatiif bu'aa kan qabaatu hinta'u jechuun dubbatu.
Kana dhiisuun biyyattiifi paartii isaanii baraaruuf, waan ummatichi gaafateef deebii kennuun barbaachisaa ture jedhaniiru. Kun ammoo haala nagaatiin taayitaan akka wal harkaa hinfudhamneef karra kan cufuudhas jedhaniiru.
Midiyaalee hawaasaa keesatti hirmaachuun yeroo baayyee ijjannoo motummaa deegaruun kan beekaman Obbo Zaraayi Hayilamaariyaam ammo, ibsi dhaabbaticha akka kan duraa jechootaan kan gutameefi haala biyyattiin keessatti argantu kan xiyyeefannaa keessa hin galchiin osoo hintaane, kan haala gadaanaa biyyattiifi ummatichi keessa galan ifatti kan agarsiise waan ta'eef, ''itti gamadeera'' jedheera.
Haaluma ibsa ADWUI baaseetiin oggantoota olaaloo irraatti tarkaanfii fudhachuu gara hojiitti hinkiku yoo ta'e garuu ibsichi waraqaa ta'uurra ce'uun hiikaa hinqabaatu jedhaniiru.
Hariiroo qajeelfama hin qabne
Akka obbo Zaraayiittis garummaa hariiroo kaayyoo malee jechuun, gareewwan yaadaafi kaayyoodhaan walitti dhufeenya hinqabne garuu bu'aa yerootiin yoo walittti michooman kan umamuudha. Dhaabbileen biyyaaleessaa ADWUI kanaaf saaxilamtoota ta'uun turuunsaanii fi ibsawwan midiyaalee oggananiin kennaa turan yadataniiru.
"Sababii dhuunfaa oggantoota adda bilisa baasaa ummattota Tigireefi Sochii dimokraasii ummata Amaaraa jiduutti umameen, oggantoonni adda bilisa baasaa ummattota Tigiree ummata Amaaraa akka ummata ofiitti waan hinilaalleef, akkasumas dhaabni Sochii dimokraasii ummata Amaaraa sadarkaa ummata tigree akka kan ofiitti hinilaallee irra gahameera,'' jedhu.
Kana malees, haaluma walfakkaatuun oggantoonni DhDUO fi somalee Itoophiyaa adeemsa ADWUI tiin ala amma waraana biyyoota lamaanii fakkaatuutti midiyaalee tamsaasaa turaniiru, jedhuun Obbo Zaraayii oggantoonni dhaabbilee biyyaaleessa hariiroo kaayyoo maleetiif saaxilamu isaanii ibsu.
Akka obbo Abbabaan jedhanitti ibsichi hariiroowwan qajeelfama hin qabne wayita jedhu dhaabbileen biyyaalesssaa lama beekamtii ADWUI alatti michummaa kamiyyuu uumuu akka hin dandeenye akka ta'e beekamaadha.
Hariiroon hawaasummaa akkasumas dhaabaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa gidduutti cimuunsaa dhiibbaa siyaasaa nurratti uuma jedhanii warri yaadan jiraachuu agarsiisa jedhu.
"Saboota kunneen lamaan gidduutti hariiroon garlamee karaan itti dhowwamu hin jiru. Kunimmoo waggoota 25nan darbaniif daandii irra deemamaa ture gaaffii keessa kan galchu, gaaffiis kan itti uumu natti fakkaata,'' jedhan obbo Ababaawu.
Ibsichi michummaa Amaaraa fi Oromootti bishaan naqe kan jedhan Dr. Daanyaachew namni jedhaman ammoo kan waraanaan argame hariiroo qajeeltoo qabu ta'ee kan fedhii fi jaalala ummataarratti bu'eerrafame akkamiin qajeelto-maleessa jedhama jechuun gaaffii kaasu.
Obbo Siyyum namni jedhamanis akkuma Dr. Daanyaachew yaadichaan mormu.
''Biyya tokko keessatti saboonni sirna tokko qaban, seenaansaanii walitti hidhatu egereensaanii kan waliin ta'u,dhimma walitti isaan fidurratti mari'atanii hariiroosaanii cimsuuf yaaluun akkamitti gochaa qajeeltoo hin qabne jedhamuu danda'a jennee gaafachuu barbaachisa,'' jedhan.
Egaan qajeeltochi maali jennee yoo gaafanne kan Kanaan dura addaddummaa dhaadhessaa ture jechuu akka ta'e hubanna, innis paartii ADWUIdhaan kan durfamu jechuudha jedhaniiru.
Akka yaada Obbo Siyyumitti namni saboota lamaan gargar baasuu barbaadu isicha sirna Appaartaayidii diriirsee haaloo qabachuurraa fayyadamuuf yaada qabuudha.
Saboonni akka hariiroosaanii hin cimsine ,akka gargar ba'an kan barbaaduu fi yoo michooman tarkaanfiin fudha kan jedhu nageenyummaadhaaf mitis jedhaniiru obbo Siyyum.
Akka Obbo Mulaatitti ammoo hariiroo saboota gidduutti uumamu qofa osoo hin taane ibsicha aantummaa ummataas waan abaaruuf ummatarratti akka xiyyeeffatan agarsiisa.
"Miidiyaalee badii gabaasan"
Dhaabileen midiyaa motummaa fi dhuunfaa sirna heera motummaa gara cinaatti dhiisuun shakkii saboota jidduutti uumuu keessatti hirmaata turan sirreesuu kaasee, gaazexessitooti dhimmicha keessatti hirmaannaa kallattii taasisaa turanis ta'ee oggantoonni gara man murtiitti geeffamuun tarkaanfiin irratti fudhatamu akka danda'u obbo Zaraayii ni dubbatu.
Akka Dr. Danyaachaw jedhanitti miidiyaan tokko tokko akka of sirreessan kan akeekkachiisu paartiin biyya bulchaa jiru waan hunda akka to'atuu fi deebi'eemmoo miidiyaan hundi afaansaanii ta'uun waan isaan barbaadan qofa akka gabaasu barbaaduusaanii agarsiisa.
Kanaan booda miidiyaan kamiyyuu waanti paartichaan hojjetamu hunduu sirrii akka ta'e akka gabaasanii fi walabummaa miidiyaa xiqqooshee mul'achaa jiru deebisanii akka cufan kan agrsiisu ta'uus ibsaniiru.
Obbo Siyum yaada Dr. Daanyaachaw irratti walii galu,''ADWUIn yaada biraa dhagayuuf qophii hin qabu. Yeroo dhihoo asitti miidiyaa komii hawaasaa keessummeessaa jiranitti akka hin gammadne agrsiisa yaadi kun,''jedhan.
Yaadni kennamu mataasaatti hookkara akka hin taane kan dubbatan Obbo Siyyum , hinumaa qaawwaa jiru akka duuchaniif karaa itti agarsiisa jedhan.
Yeroo ammaa kana miidiyaan naannolee afaan Paartii isaanii ta'uu keessaa ba'anii komii hawaasaa keessummeessaa jiraachuu kan dubbatan Obbo Ababaawu, kana akkamiin hojjetan kan jedhus tarii nama shakkisiisuu mala.
Tarii Kanaan booda waan ADWUIn barbaadu qofa hojjechuu malu jedhaniiru.
Akka Obbo Mulaatuutti miidiyaa keessatti bishaantu qallate jechuun gamaaggamaa raawwiin gaazeexeessaa gidirsuu malu malee jijjiiramni addatti isaan fidan hin jiru.
Ati deggeraa paartii kanaatii, atimmoo ergamaa isa sanaati jechuun gaazexeesitoota gidirsuun akkuma baratametti itti fufuu malas jedhaniiru. Hojjettoonnis aantummaa paartichaa hin qabdan jedhamuun aangoo fi hojiisaaniirraa gussamuun akka eegamullee dubbataniru